अचम्म - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
अचम्म यी हुन् संसारकै होचा अभिनेता, दुई गुणा अग्लीसँग गरेका छन् विवाह
दक्षिण भारतीय सिने उद्योग राम्रो सिनेमाको लागि मात्रै हैन राम्रा कलाकारका लागि पनि परिचित छ । यहाँका कलाकारहरुले बिभिन्न बिधामा वल्र्ड रेकर्ड राखेका छन् । उदाहरणका लाग..
संसारका अनौठा र रोचक कामहरु
सानोमा हामीलाई सबैले ठूलो भएर के बन्छौ भनेर सोध्छन् । डाक्टर, ईन्जिनियर हाम्रा लागि ठूला मान्छे, हामीलाई पनि डाक्टर वा इन्जिनियर नै बन्ने चाह हुन्छ र हामी त्यहि भन्छौं ..
यी सुपरस्टारसँग छन् ३ सय ६९ कार
सेलिब्रेटीहरुको कार क्रेजका बारेमा हामी सबै जानकार छौँ । बिशेष गरी सिनेमाका सेलिब्रेटीहरु आफ्नो स्टारडम मेन्टेन गर्नको लागि कार प्रयोग गर्छन् । यहि कारण पनि प्राय सेलिब..
गिनिज बुकमा नाम लेखाएका अर्पण भन्छन्, दुईवटा आमालाई खुशी पार्ने चाहना छ (हेर्नुहोस भिडियो)
झापा भद्रपु्र ८ का अर्पण शर्माले एक मिनेटमा ४२ शब्द रोल क्रमअनुसार स्मरण गरेर आफ्नो नाम गिनिज बुकमा लेखाएका छन् । २७ वर्षिय उनी अध्ययनमा निकै लगनशिल र तेज छन् । अर्पणले..
भारतीय सञ्चार माध्ययममा अर्चना बनिन् सन्नी लियोनी
बिकिनी तस्वीरहरु सेयर गरेर एकाएक चर्चामा आएकी अर्चना पनेरुलाई भारतीय मिडियाले नेपालीकी सन्नी लियोनी भनेर सम्बोधन गरेको छ । अर्चनाले मिडियासँगको कुराकानीमा आफूलाई सन्नी ..
१० वर्षकी बालिकाको मुखमा रुख जस्तो टुसा पलायो !
बङ्गलादेशको उत्तर दिशामा बसोबास गर्दै आएकी १० वर्षिय बालिका साहानाको अनुहार बिस्तारै रुखमा परिणत हुँदै गएको छ । उनको अनुहारमा रुखको हाँगाजस्तो टुसा उम्रिनुको कारण ई.भी...
धेरै ह्याण्डसम हुँदा देश निकाला भएका युवक
वल्र्डस्टप मस्ट डट कमले नोभेम्बर महिनामा जारी गरेको संसारका सुन्दर पुरुषकोे छैठौँ नम्बरमा रहेका दुबई बेस्ड मोडल, अभिनेता फेशन फोटोग्राफर, तथा राईटर उमर बोरकान अल गाला ईन्टरनेटमा धेरै खोजिने सेलिब्रेटीको रुपमा पनि चिनिन्छन् । तर जानकारी अनुसार उनलाई धेरै ह्याण्डसम भएका कारण साउदी अरबबाट देश निकाला गरिएको थियो । २९ बर्षीय उमर मध्य..
रुसमा गरियो संसारकै महंगो विवाह, कति भयो खर्च ?
रुसीका अरबपती इलकोम सोकिरोवले आफ्नी छोरीको विवाह धुमधामले गरेका छन् । इलकोम उत्तर पूर्वी उज्बेकिस्तानमा भएको होटलका मालिक हुन् । उज्बेकिस्तानको सबै भन्दा ठूलो सपिङ सेन्टरमा उनको ६५ प्रतिशत सेयर पनि छ । उनकी छोरीको विवाह संसारकै महंगो विवाह साबित भएको छ । विवाहमा सेमिरोवले बेलायती डिजाईनरको ५ लाख पाउण्ड (६ लाख ५८ करोड) को [&helli..
तस्वीरमा विश्वकै मोटी महिला, जो हिडडुल गर्न नसकेको ९ वर्ष भयो
३६ वर्षीय इमान अहमत अश्दुलातीको तौल ५ सय किलो छ । उनीनै विश्वमा धेरै तौल भएकी महिला भएको बताईन्छ । उनी शरीर धेरै मोटो भएका कारण हिडडुल गर्न नसकेको ९ बर्ष भईसकेको छ । २६ वर्षको हुँदा सामान्य अवस्थामा हिडडुल गर्न सक्ने उनी अहिले घरमै सुत्ने गरेकी छिन् । उनलाई खाना खान, ड्रेस चेन्ज गर्न […]
कस्ता अभिभावक ? जन्मेको १५ दिनमै १० हजारमा सन्तान बेचिदिने
भारतको तेलङगानास्थित नलगोडा जिल्लामा एक परिवारले आफ्नो १५ दिनको शिशु बेचिदिएको खबर प्राप्त भएको छ । १० हजार रुपैयाँमा उनीहरुले एक निसन्तान परिवारलाई आफ्नो सन्तान बेचेका हुन । सन्तान बेच्ने दम्पतीलाई प्रहरीले सोधपुछ गर्दा आफ्नो ३ छोरी भएका कारण चौथो सन्तान पनि छोरी नै जन्मेको भन्दै उनीहरुले आफ्नो सन्तान बेचेको बताएका छन् । दैनिक ..
हेर्नुहोस् खुट्टाले खाना खाने बालिका
रसियामा बसोवास गर्दै आएकी वसिलिनाको जन्मिदै एक हात थिएन । हात नभएपनि उनी खुट्टाले काम चलाउने गर्छिन् । उनले खुट्टाले खाना खाएको देख्दा धेरैलाई अचम्म लाग्छ । उनी निकै सहज तरिकाले खाना खाने गर्छिन् । आफ्नी छोरीले खाना खाएको एक भिडियो उनकी आमाले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छिन् । जुन अहिले चर्चामा छ । भिडियोमा […]
बंगलादेशमा भयो ८० वर्षको बृद्ध जस्तै देखिने शिशुको जन्म
बंगलादेशमा अचम्मको शिशुको जन्म भएको छ,जुन कुराले चिकित्सा बिज्ञान क्षेत्रलाईनै अचम्मित पारीदिएको छ । हालै मात्र जन्मिएकायी शिशु झ्टट हेर्दा ८० वर्षको बृद्ध जस्तै देखिन्छन् । शिशुको अनुहारमा देखिएको चाउरीपन , कालो लामो कपालले सबैलाई चकित पारेको छ । शरीरभरी रौँनै राँै उम्रिएको छ भने उनको छाला पनि कडा छ । बंगलादेशको माउरामा जन्मिएक..
गुगललाई चुनौती दिँदै आयो भिडियो रेकर्ड हुने नयाँ स्मार्ट चश्मा
चर्चित म्यासेजिङ एप्लिकेशन स्न्याप च्याटले आफ््नो पहिलो ग्याजेट क्यामेराको रुपमा स्मार्ट चश्मा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले उक्त स्मार्ट चश्माको नाम स्पेक्टेलक राखेको र सो चस्माको प्रयोग गरी प्रयोगकर्ताले ३० सेकेण्ड सम्मको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्ने जनाएको छ । उक्त स्पेक्टेकल्सका निमार्णकर्ता इभान स्पिङगलले आफूले आफ्ना साथीहर..
सर्पसँग नडराउने बच्चा
हमिरपूरमा बसोबास गर्ने ११ वर्षकी बालिकालाई सर्पसँग डर लाग्दैन् । उनी सर्पलाई खाना खुवाउने, खेल्ने मात्र नभएर सर्प सँग कुराकानी पनि गर्छिन् । उनी सर्पहरु बिना एक छिन बस्न सक्दिनन् । सर्पहरु पनि घमटीको हार जस्तै उनी माथि जुन्डिएर बस्ने गर्छन् । उनले सर्पहरुलाई गीत पनि गाएर सुनाउने गर्छिन् । उनको नाम नाजनिन हो । […]
पाकिस्तानमा १ सय १८ वर्ष देखि रुख गिरफ्तारमा
पाकिस्तानमा १ सय १८ वर्षदेखि एउटा रुखलाई गिरफ्तार गरिएको छ । यो रुखलाई सन् १९९५ देखि फलामको सिक्रीले बाँधेर राखिएको छ । बेलायती सेनाको अफिसर जेम्स स्क्वेड रक्सीले मातेर नसामा हिडिरहेका थिए । यही क्रममा उनलाई रुख उनि तर्फ आईरहेको जस्तो महसुस भयो । रुखको यस्तो दृश्य देखेर उनि डराए । जसका कारण उनले सेनाका […]